Wariyeyaasha Reer Sweden oo Dhakhso Xabsiga Looga Sii Dayn Doono – Rasaasa News
Wariyeyaasha Reer Sweden oo Dhakhso Xabsiga Looga Sii Dayn Doono
Jul 23, 2011 " sidaas waxaa wakaaladaha wararka u sheegay Danjire Jens Odlander oo dalka Sweden u jooga Ethiopia ., "Waxay dareemayaan wanaag iyo farxad, Wariyeyaasha Reer Sweden oo Dhakhso Xabsiga Looga Siidayn Doono, waxaana loola dhaqmay si wanaagsan
“Waxay dareemayaan wanaag iyo farxad, waxaana loola dhaqmay si wanaagsan,” sidaas waxaa wakaaladaha wararka u sheegay Danjire Jens Odlander oo dalka Sweden u jooga Ethiopia .
Labada wariye ee reer Sweden Martin Schibbye iyo Johan Persson waxaa la qabtay July 1, 2011 iyaga oo dhaawac ah, ka dib kolkii uu dagaal dhex maray arggagixisada Jwxo-shiil, oo ay la socdeen iyo ciidamada Ethiopia, dabadeena waa la xidhay.
Tan iyo bilowgii Julay waxaa lagu hayey xabsi ku yaal Ethiopia. Maalintii khamiista ahayd July 21 ayey dawlada Ethiopia go,aansatay in xabsiga lagu sii hayo 28 maalmood oo kale inta ay ka dhamaanayso baadhista ugu horaysay eedaynta.
Danjire Odlander, ayaa booqday Maanta galinkii hore labada maxbuus ee reer Sweden, wuxuuna u geeyey buuggaag iyo warqado gaar ah oo ka yimid qoysaska Sweden.
Anaga oo tixraacayna Danjiraha, labada wariye niyadoodu aad bay u wanaagsan tahay, waana laga daweeyey dhaawacyadii, laakiin Danjiruhu wuxuu qorshaynayaa in caafimaadkooda uu baadho dhakhtar ay safaaradu leedahay.
Waxaa kale oo uu Danjiruhu yidhi labada ninba waxay helaan khudaar cusub oo bisayl iyo mida karinta u baahan isugu jirta. Iyaga oo u maraya Booliska waxay wax ka iibasan karaan dukaamada ku yaal dariiqyada.
Danjire Odlander waxaa kale oo uu yidhi “labada wariye waxay diideen in ay galeen dambi arggagixisonimo.”
“Waxay si joogto ah isugu dayayeen in ay cadeeyaan kaliya in ay yihiin wariyeyaal. Hasayeeshee waxay ogolaadeen in ay si sharcidaro ah ku galeen dal,” Danjire Odlander ayaa sheegay.
In kasta oo ay dacwadoodu tahay mid khatar ah, hadana waxaa lagu qanciyey in si dhab ah loo hayndoonaa 28 maalmood, ka dibna waa la siidayn doonaa.
Labadoodaba, Schibbye iyo Persson waxay beeniyeen muuqaal filim ay gacmahooda ku haystaan hub.
Danjire Odlander, waa booqashadiisii 4aad tan iyo intii la xidhay labada nin, waxaana loo ogolaaday Danjiraha in uu booqdo Jamca walba.
Horaa loo yidhi “laan-dheere wad mooyee wantatacow uma dhinto.” Waxaan laga war haynin geeri iyo nolol wiilashii reer miyiga ahaa ee Ogadeen ee lala qabtay laandheeraha reer Swedish. Ogow iyagaba waxaa maskaxda ka xaday Jwxo-shiil iyo Jaalkiise.
Guna-gado: “Aniga iyo Ninkaad Taqaanaan Mid Doorta” Janaraal Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis.
Jwxo-shiil, oo Dawarsi Fool-xun ka Bilaabay Australia